वातावरण संरक्षणका लागि डिजिटल नोट - साइन्स एण्ड टेक्नो - साप्ताहिक
वातावरण संरक्षणका लागि डिजिटल नोट
जेष्ठ २५, २०७३
जुन ५ मा हामी विश्व वातावरण दिवस मनाउँछौं । वातावरण दिवसका अवसरमा हामी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित गर्छौं । कागजको प्रयोग कम गरेर पनि हामी वातावरण जोगाउन सक्छौं । कागज बनाउन नै विश्वमा प्रत्येक वर्ष करोडौं हरिया बोटबिरुवा काटिन्छ । त्यसैले कागजको सट्टा विभिन्न प्रकारका अनलाइन टुल्स प्रयोग गरी डिजिटल नोट बनाउने बानी बसाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यही कुरालाई मनन गरी अहिले विश्वमै कागजको सट्टा डिजिटल सामग्री प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ । यसका कारण दैनिकी सहज हुने मात्र होइन, वातावरण संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्छ । कुनै पनि कुरा टिपोट गर्न हामी कागजको डायरीको सट्टा स्मार्टफोन प्रयोग गर्न सक्छौं । स्मार्टफोनमा भएका सामान्य नोटका साथै अन्य एप्सहरू प्रयोग गरेर पनि हामी आफ्नो कामलाई स्मार्ट बनाउन सक्छौं ।
कुनै पनि कामको टिपोट गर्न वा नोट बनाउन गुगल किप एप निकै उपयुक्त छ । यसको इन्टरफेस सामान्य छ । यसमा लेख्न पनि सजिलो छ । यसमा आफ्नो विचार, चेकलिस्ट तथा विभिन्न लेख राख्न सकिन्छ । यसमा भ्वाइस मेमोसमेत रेकर्ड गराउन सकिन्छ । अडियो ट्रान्सक्रिप्सनका लागि यो धेरै नै उपयोगी छ । आइओएस, एन्ड्रोइड तथा वेब सबैमा यो एप्स प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
वान नोट नामक एप्सलाई पेपर नोटबुक पनि भन्न सकिन्छ । आफूलाई मन लागेको कुनै पनि कुरा कागजमा लेखेजस्तै क्लिक गरी लेख्न सकिन्छ । यसमा नोटका साथमा इमेज, फाइल, अडियो, स्केच र भिडियोसमेत राख्न सकिने अप्सन उपलब्ध छ । यो माइक्रोसफ्ट वान नोट क्लाउड स्टोरेजसँग लिंक हुन्छ । यसलाई आइओएस, एन्ड्रोइड तथा विन्डोज फोनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यो एक प्रकारको खाली पेज जस्तो लाग्छ । नाम जस्तै यो प्रयोग गर्न पनि सजिलो छ । खाली पेजमा कुनै चिज लेखेजस्तै यसमा पनि आफूलाई मन लागेको कुरा लेख्न सकिन्छ । यदि कुनै महत्वपूर्ण सामग्री डिलिट भए सिम्पलनोट हिस्ट्रीबाट फेरि प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसलाई आइओएस, एन्ड्रोइड तथा विन्डोज फोनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
स्क्विड एउटा ह्यान्डराइटिङ एप्स हो । यसमा प्रेसर सेन्सिटिभ स्टाइलस वा आफ्नो औंलाले पनि लेख्न सकिन्छ । यसमा डकुमेन्ट, इमेज, पीडीएफ आदि इम्पोर्ट गर्ने सुविधा छ । यसमा टेक्स्टलाई बोल्ड तथा हाइलाइट गर्न सकिन्छ । यसमा सेयरिङ गर्न मिल्ने अप्सन पनि छ । यो एप्स एन्ड्रोइड र विन्डोज दुवै भर्सनका फोनमा उपलब्ध छ ।
डिजिटल नोटबुकको क्षेत्रमा सर्वाधिक लोकप्रिय एप्लिकेसन हो— एभरनोट । नोट र डकुमेन्टलाई स्क्यानिङ र वेब पेज क्लिपिङका लागि प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ । यसको सहयोगले विभिन्न प्रकारका नोट तयार गर्न र आफ्नो जीवनलाई डिजिटल लाइफमा परिणत गर्न सकिन्छ । यसलाई आइओएस, एन्ड्रोइड तथा विन्डोज फोनमा प्रयोग गर्न मिल्छ ।
कागज र वातावरण
हामीले कागजको प्रयोग कम गर्‍यौं भने वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुग्छ । कागज कम प्रयोग गर्दा बोटबिरुवाको नोक्सानी कम हुन्छ । यसले गर्दा वातावरण संरक्षण हुन्छ ।
 कार्यालयमा प्रयोग गरिने १ टन कागज बनाउन करिब २४ वटा रुख प्रयोग गरिएको हुन्छ ।
 एक पाना कागज बनाउन करिब डेढ कप पानी खर्च हुन्छ ।
 एक टन कागज बनाउँदा करिब ६० पाउन्ड वायु प्रदूषण उत्पन्न हुन्छ ।
 एक केस अर्थात् १० रिम्स कागज एउटा रूखको ६० प्रतिशत बराबर हुन्छ ।
 कागज उद्योगले अन्य कुनै पनि उद्योगको तुलनामा बढी पानी खर्च गर्छन् ।
 पल्प तथा पेपर इन्डस्ट्रीले संसारको करिब ४ प्रतिशत शक्ति प्रयोग गर्छन् ।
प्रकाशित :जेष्ठ २५, २०७३
बरु अस्पताल जान्छु तर पैसाका लागि अभिनय गर्दिनँ
आहा ! अमेरिका, आत्था ! अमेरिका
एपेक्स डिजिटल फुड फेस्ट
केटाहरू लागि डिजाइनिङ गार्‍हो छ
डेस्कटप डट आईएनआईको प्रकोप श्रावण ४, २०७६
नयाँ रंगमा ओप्पो एफ–११ श्रावण २, २०७६
मोबाइल एप्समा नेपालका ट्याक्सी श्रावण १, २०७६
फेसबुकको डिजिटल करेन्सी लिब्रा असार ३१, २०७६
५० प्रतिशत छुटमा नयाँ मोबाइल असार २९, २०७६
एपोलो–११ मिसनको विशेष हुलाक टिकट असार २०, २०७६
ई–टाटुबाट मुटुको धड्कन जाँच असार १९, २०७६
८ अर्ब मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता असार १८, २०७६
होन्डा डियो डीएलएक्स असार १७, २०७६
एक्सेल सिटको समस्या असार १६, २०७६